ဝန်ဆောင်မှု, ဝန်ဆောင်မှု, ချိုးကွေ့ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Topic: ဝန်ဆောင်မှု, ဝန်ဆောင်မှု, ချိုးကွေ့
ရေနံဝယ်ယူတဲ့အခါမှာညွှန်ပြအဖြစ်ဘယ်မှာဒြပ်ရေနံသို့မဟုတ် semisynthetic ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ဘယ်လို
ဆီတစ်ခုကို ၀ ယ်သည့်အခါ၊ မည်သည့်ဒြပ်ဆီ (Semi-Synthetic Oil) ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်၊ မည်သည့်နေရာတွင်ဖော်ပြသည်၊ ထုတ်လုပ်သူ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပါ။ ဥပမာမိုဘိုင်း1တွင်မော်တာဆီတံဆိပ်၏အမှတ်အသားကိုအဓိကနှစ်မျိုးခွဲခြားသည်။
အဆိုပါပါးပျဉ်းအာရုံခံဖွင့်လှစ်များအတွက်အကြောင်းပြချက်နှိုးဆော်သံ StarLine A61 အပေါ်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်မပါဘဲ
Autostarting လုပ်သည့်အခါ StarLine A61 နှိုးစက်ပေါ်ရှိပါးပျဉ်းအဖွင့်အာရုံခံကိရိယာကိုဖွင့်သောအခါမည်သည့်အကြောင်းပြချက်မျှမရှိဘဲ key fob ပေါ်ရှိဖွင့်ထားသောပါးပျဉ်းမီးလင်း။ labovukh ရှိလက်နှိပ်ဓာတ်မီးသည်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမီးလင်းပေးသည်။ သေချာတာပေါ့ ...
နှိုးစက် Starline !!!
Starline နှိုးစက် !!! Starline A9 တွင်ထိုကဲ့သို့သော shit ရှိခဲ့သည်။ keychain ၏ပထမဆုံးခလုတ်သည်ပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာဤနေရာတွင်ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ညွှန်ကြားချက်များမှအောက်ခြေမှတ်ချက်ကိုစမ်းကြည့်ပါ။
ဘယ်ကုမ္ပဏီ၏ xenon ထား?
xenon ဘယ်ကုမ္ပဏီကိုထောက်ပံ့မလဲ အနိမ့်ဆုံးသော xenon တောင်မှမည်သည့် halogen ထက်မဆိုအလင်းရောင်ထွန်းလင်းပြီးသင်မရေးမီသင်ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ရန်လိုသည် Osram၊ Narva၊ General Electric မှခန်နွန်ကောင်းမွန်သည်။
ကကားတစ်စီး 4-လေဖြတ် Scooter အတွက်ဆီကိုလောင်းဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိ ?? အဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမ Esle ??
ကားဆီကို4stroke scooter ထဲထည့်လို့ရလား။ မရရှိလျှင်, အဘယ်ကြောင့်မ ?? မဟုတ်ဘူး တစ်ချိန်ကစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ သူကပိုထူတယ်၊ ပြီးတော့မော်တာလည်ပတ်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာဘယ်လိုလည်ပတ်နေတယ်ဆိုတာသင်ကြားနိုင်တယ်။ ငါ့မှာရှိတယ်…
k36 carb ။ အဆိုပါ carb k36 ညှိဖို့ဘယ်လို
carb k36 ။ carb k36 ကိုဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းချိန်ညှိရမလဲ၊ ၎င်းသည်သီးခြား float chamber ပါသည့် carb အဟောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ မော်တော်ယာဉ်များပေါ်တွင် ၈၀ နှစ်လယ်လောက်ရောက်အောင်မည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း။ K-80 carburetor ၏ညှိနှိုင်းမှုကိုအောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်သည် ...
Defferentsial 2106 vases ။ ဘာဘီယာအရက်ချက် differential ကိုလျှင်ပြောင်းလဲပစ်ကြမည်နည်း သာ. ကောင်း၏နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ပိုဆိုးသည်ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
differential ကို welded လျှင်အဘယျသို့ပြောင်းလဲလိမ့်မည်နည်း ဘာတွေပိုကောင်းလာမှာလဲ၊ ဘာဆိုးလာမှာလဲ။ ဘီးနှစ်ခုလုံးသည်တူညီသောလမ်း (အပိတ်) နှင့်အဆက်မပြတ်လည်နေလိမ့်မည်။
ငါဘယ်လိုပန်းအိုးပေါ်မှပါးပျဉ်းဖွင့်ကြဘူး 2107? Cable ကိုရဲတိုက်ထဲကဆွဲထုတ်ခဲ့သည်! အခြေအနေကပိုရှုပ်ထွေးပါ!
VAZ 2107 မှာပါးပျဉ်းကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ? အဆိုပါကြိုးရဲတိုက်ထဲကဆွဲထုတ်! အခြေအနေကပိုပြီးရှုပ်ထွေးလာတယ်။ ဂန္ထ ၀ င်မှာတော့ပါးပျဉ်းကအတော်လေးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တယ်၊ ကားမောင်းသူဘက်ကနေဆွဲထုတ်ပြီးကေဘယ်ရှပ်အင်္ကျီကိုလက်နဲ့လက်နဲ့ရနိုင်တယ်။
ပေးတဲ့ dialog ကုဒ်တွေနဲ့နှိုးဆော်သံ scan ဖတ်သို့မဟုတ်မ။ kodgraberami ။ ဒါလျှင်အထက်ပါလင့်ခ်ဆောင်းပါးအားဆင့်ဆိုရမည်မှာ
ပေးဆပ်ရန်ကုဒ်နံပါတ်များကိုပေးသည်ဖြစ်စေ၊ ကုဒ် grabers ။ တကယ်လို့ရှိရင်ဆောင်းပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လင့်ကိုပြောပါ။ နိယာမမှာ - သူတို့က ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်သည်။ ကားပိုင်ရှင်သည်ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်သည်။ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ကုဒ်ကိုကြားဖြတ်ထားတယ်
မိမိလက်နှင့်ပလပ်စတစ် Scooter ပန်းချီဖို့ဘယ်လို
မီးသွေးအိမ်တွင်းစစ်ထုတ်စက်သည်ပုံမှန်အတိုင်းမည်သို့ကွာခြားသနည်း။ ၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစစ်ထုတ်ခြင်းများကိုကျွန်ုပ်မယုံနိုင်ကြောင်း ...
ဘယ်လိုမီးသွေးအိမ် filter ကိုပုံမှန်နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားသလဲကပိုကောင်းစိစစ်? ငါမယုံနိုင် ... သူတို့ဒီမှာရေးထားသကဲ့သို့ - တစ် ဦး အသွားအလာယို၌ရပ်နေ, ဖြစ်ကောင်းကျောက်မီးသွေးတ ဦး တည်းအနည်းငယ်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ - သင်လေကြောင်းထောက်ပံ့မှုကိုပိတ်ထားသည်အထိနုပ်ပါလိမ့်မည်။
ကားပေါ်မှာလျှပ်စစ်တာဘိုင်ကိုဘယ်သူတပ်ထားတာလဲ။ သူမနဲ့ပိုကောင်းတာလား rzhu)))))))))))))))))))) Небеспокойтесь - ивыисцелитесь ... всеисчезнет ... этомотоциклавновом))) процессорပန်ကာပုံစံတာဘိုင်တစ်လုံး ...
ပုံမှန်အတိုင်းလေကြောင်း filter ကိုကနေစစ်ထုတ်သုညခုခံကြားရှိခြားနားချက်?
သုညခုခံ filter နှင့်သမားရိုးကျလေထုစစ်ထုတ်မှုအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။ tuncon စင်တာ "bilcon" ၏အထူးကုလုပ်ရန်ဘာမျှမ ... နောက်ထပ်တစ်ခုကလှည့်စား။ အကယ်၍ သင် filter နှင့်ယင်း၏အိမ်ကိုလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်လျှင် motor power ...
ကားထဲမှာ ABS ဆိုတာဘာလဲ မျိုချရန်သာကျန်ရှိနေသေးသောဂျုံယာဂုပုံစံဖြင့်ရှင်းပြသည်။ ထို့ကြောင့်ဘီးသည်ကတ္တရာကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်မထားနိုင်ခြင်းနှင့်ကားသည်လျှော ဝင်၍ မြင်းစီး။ မသွားနိုင်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
ယင်းအခိုးခံရကားတစ်စီးပေါ်ကိုယ်ထည်အရေအတွက်အားသတ်ပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံ။ client ကိုတစ်ဦးတွန်းလှည်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည်
ခိုးယူထားသောကားပေါ်တွင်ခန္ဓာကိုယ်နံပါတ်များကိုမည်သို့သတ်ရမည်နည်း။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူနေသူသည်ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ကိုစောင့်နေပြီးဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာမသက်ဆိုင်သောကိစ္စဖြစ်သည်။ တစ်ဘီးကိုခိုးယူပေမယ့် ...
လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုခြင်းကို Catalyst အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု ???
CATALYST ဖြတ်တောက်မှုသည်လောင်စာသုံးစွဲမှုအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသနည်း။ ဦး နှောက်သည် ပိုမို၍ ပိုမိုဆိုးရွားသည့်အရောအနှောများကိုပြင်ဆင်ပေးသောကြောင့်စားသုံးမှုတိုးလာသည်။ ထို့ကြောင့်စွမ်းအင်တိုးတက်မှုနှင့်အိပ်ဇောဟိုက်ဒရောလစ်အားလျော့နည်းမှုကြောင့်မဟုတ်ပါ။ အဲဒါ…
စတီယာရင်ဘီး၏ဘယ်ဘက်ရှိ SHIFT LOCK ခလုတ်သည်အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်း။ ဘာအတွက်လဲ
စတီယာရင်ဘီး၏ဘယ်ဘက်ရှိ SHIFT LOCK ခလုတ်သည်အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်း။ ဘာအတွက်လဲ ညွှန်ကြားချက်များအရအော်တိုဂီယာလီဗာကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်၊ ထို့နောက်ဤကမ္ပည်းပါသော့ကိုကဒ်အထိုင်ထဲသို့ထည့်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
အကြောင်းပြချက်ကဘာလဲမီးဖိုစက်ဒေဝူး Nexia ကနေအအေးလေကြောင်းမှုတ် ???
မီးဖိုစက်မှလေအေးလေလေ DEU Nexia ဘာကြောင့်လဲ ??? ၎င်းတို့သည်ဥဇဘက်ကစ္စတန်သို့သော်လည်းကောင်း၊ ကာဇက်စတန်တွင်သော်လည်းကောင်းသိုလှောင်ထားနိုင်ပြီးနွေးနေပြီ၊ မီးဖိုမလိုအပ်ပါ။
အဘယ်သို့ငါဖြစ်ပျက် zakipechu အင်ဂျင်မဟုတ်ပါ, အင်တိဖရိစ်ဓါတ်နှင့်အတူအင်တိဖရိစ်ဓါတ်ရောထွေးနိုင်ပါသလား?
အင်တီဖရီဂျင်ကဒီကနေမဆူပွက်နိုင်အောင်အင်တီရီယမ်ကိုအင်တီဖရီဂျင်နဲ့ရောစပ်လို့ရသလား။ တ ဦး တည်းအခြေခံပေါ်မှာ, ထို့နောက်သင်မနိုင်, သငျသညျမတတျနိုငျ! က antitosol ဖြစ်လိမ့်မည် မော်တာအေးလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ပါ၊
VAZ - 2114, 1,5 injector, အအေးမိခြင်း
VAZ - 2114, 1,5 injector, အအေးမိတာစတာမကောင်းဘူး၊ အကြောင်းရင်းမှာဝါယာကြိုးများဖြစ်သည်။ အမှုတစ်ခုရှိခဲ့သည် - အအေးမိနေစဉ်အတွင်းလက်ကိုင်အာရုံခံကိရိယာ၏ခုခံမှုပျောက်ကွယ်သွားပြီးစက်နှိုးခြင်းနှင့်ဆေးထိုးခြင်းအချိန်များ ...
77 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,922 စက္ကန့်ကျော် Generate ။